Adeegyada Qashinka Dheeraadka iyo Sicirada | Saint Paul, Minnesota
All In Adeegyada Qashinka 2018
Fogeynta waxyaabahaas waaweyn iyo elataroonigga waa fududaatay!
Aruurinta qashinka kaddib, milkiileyaasha guriga waxay kaloo yeelan karaan 2-3 shay waaweyn, waxyaabo "balaaran" ama elataroonig (taasoo ku xeran heerka adeegaada), lacag la'aan, sannad kasta. Fadlan, waxyaabahaan ha ku ridin gaariga qashinka. Haddii aad qabtid waxyaabo waaweyn, waxba ha ka walwalin. Qaadehaada ayaa qaadi doono kuwaas marka aad bixisid khidmad go'an. Halkaan waxaad ku arki doontaa liiska waxyaabaha waaweyn ama elataroonigga.
Milkiileyaasha guriga waxaa mamnuuc ka ah in ay alaabta soo socoto ku ridaan gaariga qashinka si looga qaado: wasakhda "biomedical" (cirbadaha), wasakhda halista, wasakhda deydka (milkiilaha guriga wuxuu dalban karaa adeegga wasakhda deydka xilliga marka uu bixiyo kharash dheeraad ah), wasakhda elataroonigga (waxaa loo aruurin karaa sida shay "weyn"). Fadlan booqo RamseyRecycles.com si aad u heshid macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan fogeynta.
Habka loo aruuriyo waxyaabaha waaweyn ama wasakhda elataroonigga: Dadka daggan waa in ay la xariiraan qaadaha ugu yaraan 48 saac ka hor inta aan la gaarin maalinta aruurinta caadiga si ay u ballansadaan qaadidda. Fadlan, waxyaabahaan ha ku ridin gaariga qashinka caadiga. Qaadaha wuxuu soo aruurin doonaa shayga weyn muddo 7 maalin gudahooda kaddib marka la gaarsiiyo codsiga soo qaadidda. Qaadaha wuxuu kaloo la socon doonaa tirada waxyaabaha waaweyn ee laga soo aruuriyo hanti kasta.
Waqti badan ku qaado in aad ka heshid deydkaada - adiga oo aan qaadin wasakhda deydkaada.
Dhamaan qaadeyaasha waxay iminka bixiyaan adeegyada wasakhda deydka marka la bixiyo khidmad dheeraad ah. Dhamaan wasakhda deydka waa in lagu rido gaari khaas ah ama bacda la ogol yahay. La xariir qaadahaada si aad isugu qortid adeegga wasakhda deydka. Wasakhda deydka waxaa la aruurin karaa maalin ka duwan adeegga qashinka caadiga.
Adeegga Isku Qoridda Xilliga (Abriil 15-Nofeembar 30):
$120/sannadkii 1 gaariga wasakhda, iyo ilaa 8 bacyada la burburiyo, si loo qaado todobaad kasta xilliga wasakhda deydka. Milkiileyaasha guriga waxay dooran karaan in lagu soo dallaco biilka saddax bil kasta ($30/biilka ama xilliga buuxa $120).
Adeegga Aan Leysku Qorin:
$3 halkii bac la burburiyo ama duub
Waxaa la heli karaa adeegyada "Socodka".
Dadka daggan ee qaba itaalka darran, waxaa dhici karto in la siiyo adeegga socodka si looga aruuriyo gaariga qashinka meel ka duwan hantida. Si ay u dalbadaan adeegga socodka, dagganeyaasha waa in ay dhamaystiraan foomka arjiga kaddibna ku wareejiyaan qaadaha loo xil saaray. Ma jiro khidmad dheeraad ah oo laga bixiyo adeegaan haddii dagganeyaasha muujin karaan baahi gaar ah oo la xariirta jirka.
Dagganeyaasha aan la kulmin sharuudaha bacdamaa ay itaal darran yahiin waxay bixin karaan adeegga "socodka":
Adeegga socodka guri ku yaal in ka yar 100 cag luuqa/dhinaca lagu socdo meesha laga aruuriyo = $25/bil kasta.
Adeegga socodka guri ku yaal in ka badan 100 cag luuqa/dhinaca lagu socdo meesha laga aruuriyo = $50/bil kasta.